घरमै बसी पेटको बोसो घटाउने मन छ ? उसोभए यी काम गर्नुस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
घरमै बसी पेटको बोसो घटाउने मन छ ? उसोभए यी काम गर्नुस् !!
पेटको बोसो कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । घरमै बसेर तपाईं आफ्नो बेसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने यी तरिका अपनाउनुहोस् ।
बदाममा भिटामिन इ र प्रोटिनका साथै फाइबरको मात्रा पनि अत्यधिक हुन्छ जसले छिटो छिटो भोक लाग्नबाट रोक्छ । यद्यपी, यसमा क्यालोरीको मात्रा अलि बढि हुन्छ तर यसले पेटको बोसोलाई भने बढाउँदैन । नयाँ पुस्ता बाट सभार
खाना अपच हुने समस्याले सतायो ? यी घरेलु खानेकुराहरु खाएर राहत पाउनुहोस् !!
यी चार खाने कुराहरुले बढाउँछ क्यान्सरको जोखिम, यस्ता लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता !!